ဝါယာကြိုးလှံတံသတ္တုစပ်ပစ္စည်းစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်တရုတ်သံမဏိ Rebar Hot Rolling Mill စက် Geili
CCM & ROLLING MILLS သည် ONE STOP TURNKEY SERVICE FORPLIER
ထောင့်ဘား / ပြားချပ်ချပ်ဘားထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Rebar / ပုံပျက်သောဘားထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
သံမဏိ CCM စက်ရုံ CNC အလိုအလျောက်စဉ်ဆက်မပြတ် Casting Mac ...
စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုစဉ်ဆက်မပြတ် Casting Machine CCM,f...
အရည်ပျော်သောသံမဏိအရည်အသွေးမြင့် Ladle သန့်စင်ခြင်းမီးဖို
ဝါယာကြိုးလှံတံသတ္တုစပ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်သံမဏိ Rebar Hot Rolling Mill စက်
Overview Quick Details Condition: New Warranty: 1Years Place of Origin: Fujian, China Brand Name: GEILI Voltage: 380V Weight: 53tons Certification: ISO9001:2015 Type: Hot Rolling Mill Dimension(L*W*H): 2000*650*1890mm Power(W): 1000W Applicable Industries: Manufacturing Plant Product name: Hot Rolling Mill Machine Material: Steel Usage: Hot Rolling Steel Bar Advantage: High Efficiency Billet Size: 100*100 Speed: 8-80 M/Min ...
FOB စျေး: အသေးစိတ်စျေးနှုန်းများအတွက် PLS ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ
Min.Order အရေအတွက် - 1 အပိုင်းအစ / အပိုင်းပိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပါ PDF အနေဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
2000 * 650 * 1890mm
Hot Rolling Mill စက်
Hot Rolling သံမဏိ Bar
8-80 M / Min
လှိမ့်စက်သည်ကြိတ်ခွဲစက်သို့မဟုတ်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုစက်သည်စက်ရုံတစ်ခုသို့မဟုတ်စက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်ပြီးအပူပေးသတ္တုအစက်များကို roller များအကြားဖြတ်သန်း။ လိုအပ်သောဖြတ်ပိုင်းပုံစံနှင့်ပုံစံဘားများထုတ်လုပ်ရန်။
CCM မှလှိမ့်စက်များ၊ အိပ်ရန်အအေးနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းအထိထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပူသောလှိမ့်စက်သည် 8-32mm ပုံပျက်သော rebar, round bar, wire wire ကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 50, 000 MT - 80 0, 000 MT / တစ်နှစ်
သံမဏိအမျိုးအစား အရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်သံမဏိ၊ အနိမ့်အလွိုင်းစတီးစသည်တို့
ပစ္စည်း billet အရွယ်အစား 80mm x 80mm မှ 150mm x150mm အထိ
နောက်ဆုံးထုတ်ကုန် .55.5 -12mmmm ဝါယာကြိုးလှံတံ, Φ 8မှ 40မီလီမီတာ သံဘောင်
FUJIAN PUTIAN GEILI MACHINERY MANUFACTURING CO ။ , LTD မှ
ခံခဲ့ရပါတယ် 1995 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး , ယခင်က Xianyou Rolling စက်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်လူသိများ .2001 ခုနှစ်တွင် , Xianyou Bangtou စက် Roll ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူပေါင်းစည်း . 2008 ခုနှစ်တွင် ကျနော်တို့ စဉ်ဆက်မပြတ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်လှိမ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက် . 2011 ခုနှစ် , ကုမ္ပဏီပွနျလညျဖှဲ့စညျးနှင့်ဖူ PUTIAN GEILI Machinery MAN ထူထောင် UFACTURING, LTD ။ , အရာ အတွက်စေ့စပ် သတ္တုပစ္စည်းကိရိယာများ , အဓိကအားဖြင့်သံမဏိအတွက် -ချမှတ်ခြင်း , စဉ်ဆက်မပြတ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံ ကိုလှိမ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး , ဒီဇိုင်း , ထုတ်လုပ် , installation and general contracting services.
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကျွမ်းကျင်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းများကိုဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းကို“ turn-key” ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
သင်၏စီမံကိန်းနှင့် ပါတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပေးပါ။ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိပြီးသည့်နောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုလွှာကိုတင်ပြလိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံလာနှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
နောက်တစ်ခု - Turnkey / one-stop ဝန်ဆောင်မှု! သတ္တုဗေဒစက်ယန္တရား! သံမဏိစက်ရုံဖောင်ဒေးရှင်းတည်ဆောက်ပုံ! လှိမ့်စက်ဖောင်ဒေးရှင်း setup ကို!
နောက်တစ်ခု - သံမဏိဘားရှိသံမဏိဘားထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတွင်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သောစက်ကိုပြုလုပ်သည်
Wir အတွက်သံမဏိ Billet အဆက်မပြတ် Casting စက် ...
Competitive Supplier of Hot Rolled Steel Channe...
Xianyou စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်၊ Putian City, Fujian Province, China
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2019: All Rights Reserved ။ Featured ထုတ်ကုန်များ- Hot Tags - Sitemap.xml - AMP မိုဘိုင်း
အဆက်မပြတ် Casting Machine ၊ Slab Casting Machine ၊ CCM အဆက်မပြတ် Casting စက်၊ Ccm Casting ၊ Concast စက်၊ Continuous Casting Machine ,